ဖွံ့ထွားတဲ့ ညို့အားပြင်းအလှတွေက ရင်ဖိုစရာကောင်းပြီး စွဲမက်လှိုက်မောစေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ရဲ့ အကြမ်းစား ဗီဒီယို… – Shwe Naung
ဖွံ့ထွားတဲ့ ညို့အားပြင်းအလှတွေက ရင်ဖိုစရာကောင်းပြီး စွဲမက်လှိုက်မောစေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ရဲ့ အကြမ်းစား ဗီဒီယို…
ပရိသတ်ကြီးရေ.. သင်ဇာလို့ အားလုံးက ချစ်စနိုးခေါ်ကြပြီး ဆက်စီ ကျလွန်းနဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကြောင့် မြင်သူတိုင်းကိုရင်ဖိုစေအောင် ဖမ်းစားတတ်တဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော် မင်းသမီးချာလေးကတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
သရုပ်ဆောင်ကောင်းပြီး ဇာတ်ကားတွေလည်း များစွာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ သင်ဇာလေး ကတော့ အားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ အောင်မြင်နေသူလေးလည်း ဖြစ်ကာ အချိုးအစား ကျလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှနဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေတာပါ..။
ပုရိသပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုတွေကို အများဆုံး ရရှိထားပြီး မြင်သူတိုင်းရဲ့အမြင်အာရုံတွေကို ဖမ်းစားထားနိုင်တဲ့ သင်ဇာလေးဟာ အနုပညာအလုပ်တေံကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေကာ ကြော်ငြာတွေလည်းရိုက်ကူးပေးနေတာ တွေ့မြင်ရပါတယ်နော်..။
သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေ နဲ့ ပရိသတ်တွေကို အချစ်ပိုစေတဲ့ သင်ဇာလေးတစ်ယောက် အခုတစ်ခါမှာလည်း ကြော်ငြာရိုက်ကွင်းပေါ်က ညို့အားပြင်း ဆွဲဆောင်မှုတွေရှိလွန်းတဲ့ သူမရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ် လေးတွေကိုလည်း ဝေမျှလာပါတယ်နော်..။
ဖွွံ့ထွားတဲ့ညို့အားပြင်းအလှတွေက ရင်ဖိုစရာကောင်းပြီး စွဲမက်လှိုက်မောစေတဲ့ ရိုက်ကွင်းပေါ်က သင်ဇာရဲ့အကြမ်းစားဗီဒီယိုဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေရဲ့အသည်းတွေခြွေယူလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
ကဲ.. ဒီကနေ့လေးမှာတော့ ချစ်ရတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော်လေး မော်လ်ဒယ်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်း အားလုံးအတွက် ဝေမျှပေးလိုက်တာမို့ သဘောကျနေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်..။
‌မော်ဒယ် ဖြူသိင်္ဂကျော်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်များ……
အတွင်းသားလေး တွေပေါ်လွင်အောင် ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်ပေးနေတဲ့ ဆိုင်းလုရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး…….
ခေးကြီးလုရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်များ…….
လွတ်မြောက်နယ်မြေ တစ်နေရာသို့ ရောက်ရှိနေတဲ့ လူရွှင်တော် ပိုးလေး အတွက် အားပေးစကားများ ပြောပေးသွားကြပါဦး……….